ESI ESI ZOO TABLE NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Esi esi zoo table na Photoshop
Ịmepụta tebụl na mmemme dị iche iche ezubere maka nke a bụ nnọọ ihe dị mfe, mana maka ụfọdụ ihe mere anyị ji dị mkpa ịdọrọ tebụl na Photoshop.
Ọ bụrụ na mkpa dị otú a, mụọ ihe ọmụmụ a ma ị gaghị enwe ike ịmepụta tebụl na Photoshop.
E nwere nhọrọ ole na ole maka ịmepụta tebụl, naanị abụọ. Nke mbụ bụ ime ihe niile "site na anya", mgbe ị na-etinye oge na akwara (gbadoro onwe gị). Nke abụọ bụ ime ka usoro ahụ dị ntakịrị, si otú ahụ na-azọpụta ma.
Dị ka ọ dị, anyị, dịka ndị ọkachamara, ga-ewe ụzọ nke abụọ.
Iji wuo tebụl, anyị chọrọ nduzi ndị ga-ekpebi oke okpokoro na ihe ndị dị na ya.
Iji dozie usoro nduzi, gaa na menu. "Lee"chọta otu ihe n'ebe ahụ "Nduzi Ọhụrụ", setịpụrụ indent uru na nghazi ...
Ya mere maka akara ọ bụla. Nke a bụ ogologo oge, ebe ọ bụ na anyị nwere ike ịchọrọ ezigbo nduzi.
Ọfọn, Agaghị m ewepụ oge ọzọ. Anyi choro ikpo oku igodo oku a.
Iji mee nke a, gaa na menu Na-edezi ma chọọ ihe dị n'okpuru "Ụzọ mkpirisi keyboard".
Na windo mepere emepe na listi adaala, họta "Nchịkọta mmemme", chọọ maka "Ihe nduzi ọhụrụ" na menu "Lee", pịa n'ubi na-esote ya ma kpoo nchikota choro dika oburu na anyi tinyewo ya. Nke ahụ bụ, anyị na-ejikpọ, dịka ọmụmaatụ, Ctrlwee "/"Ọ bụ nchikota a nke m họọrọ.
Pịa na mmecha "Nabata" ma Ok.
Mgbe ahụ, ihe niile na-eme nnọọ ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Mepụta akwụkwọ ọhụrụ nke ụda chọrọ ya na igodo ụzọ mkpirisi. CTRL + N.
Wee pịa CTRL + /, na window mepere emepe anyị debara uru maka onye ndu mbụ. Achọrọ m iwepụ 10 pixels si na nsọtụ nke akwụkwọ.
Na-esote, ị ga-agbakọọ ogologo oge dị n'etiti ihe ndị ahụ, na-eduzi ọnụ ọgụgụ ha na ogo ọdịnaya.
Maka nkwekọrịta nke nkọwapụta, dọrọ nhazi nke nhazi site n'akụkụ nke e gosipụtara na nseta ihuenyo ka ntinye nke ntuziaka mbụ ndị na-akọwa ihe ndị ahụ
Ọ bụrụ na ịnwebeghị agbanyeghị ndị ọchịchị, wee jiri igodo ụzọ dị mkpirikpi rụọ ọrụ ha CTRL + R.
Enwere m usoro a:
Ugbu a, ọ dị anyị mkpa ịmepụta oyi akwa ọhụrụ, nke ga-adị na tebụl anyị. Iji mee nke a, pịa akara ngosi dị na ala nke palette ndị dị n'elu:
Iji bia (nke ọma, dị mma, gbaa) tebụl anyị ga-abụ ngwá ọrụ "Nweta"O nwere usoro kachasị mma.
Gbanwee ọkpụrụkpụ nke akara.
Họrọ ụcha zuru oke na ọrịa strok (gbanyụọ ọrịa strok).
Ma ugbua, na nke ọhụrụ e kere eke, weta tebụl.
Emere nke a dika nka:
Jide igodo SHIFT (ọ bụrụ na ịnweghị njide, akara ọ bụla ga-eme na ọkwa ọhụrụ), tinye cursor na ebe kwesịrị ekwesị (họrọ ebe ị ga-esi malite) ma tụọ akara.
Ntuziaka: maka mma, mee ka ndị nduzi mara. N'okwu a, ọ dịghị mkpa ichere njedebe nke akara na aka na-ama jijiji.
N'otu uzo ahu weputa ihe ndi ozo. Mgbe a kwụsịrị, ntụziaka ndị ahụ nwere ike imebi site na igodo ụzọ dị mkpirikpi. CTRL + H, ma ọ bụrụ na achọrọ ha, weghachite otu nchikota.
Usoro a nke ịmepụta tebụl na Photoshop ga-enyere gị aka ịchekwa oge.